в Trend / Trends, ईन्जिनियरि / / टेक्नोलोजी
कृषि जीवविज्ञानको विषय हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा जरुरी भएको छ। जैविक बोटबिरुवा संरक्षण संरक्षण (एफजीबीएनयू वीएनआईआईबीजेडआर) को रसियाली वैज्ञानिकहरूले कसरी जैविक विधिहरूको परिचय र घरेलु कृषि फार्महरूमा जैविक उत्पादनहरूको प्रयोगको सम्भावनाहरूको मूल्या assess्कन गर्दछन् भन्ने बारेमा टमाटर आनुवंशिक संग्रहको प्रयोगशालाका प्रमुख स्वेतलाना नेकोवालसँग कुरा गरे।
— Мировой рынок биопрепаратов, по विज्ञ अनुमानका अनुसार यो बर्षा 8% ले बढ्छ। के हामी भन्न सक्छौं कि यो प्रवृत्ति रूसमा पनि लागू हुन्छ?
यस वर्ष जैविक उत्पादनहरूमा किसानहरूको चासो पनि “जैविक उत्पादन र रूसी संघको केही विधायकीय ऐनमा संशोधन गरी” कानुन लागु भएपछि बढेको छ, जसको अनुसार जैविक बोटबिरुवा संरक्षण उत्पादनहरू मात्र वातावरण मैत्री उत्पादनहरू र फिड लिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
— Кого в России можно назвать जैविक उत्पादनका मुख्य उपभोक्ताहरू (बाली उत्पादनमा)?
जैविक कृषि युनियन बोर्डका अध्यक्ष सेर्गेई कोरशुनोभका अनुसार मध्य रसियामा व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि फार्म छैन जसले जैविक विधिहरू कुनै पनि रूपमा प्रयोग गर्दैनन् (माटोमा जैविक मल प्रयोग गर्दछन्, सूक्ष्म जीववैज्ञानिक तयारीहरू प्रयोग गरेर, फलफूल हरियो मल लगाउँछन् वा बालीनाली घुमाउने बालीलाई ढाक्छ)। म उहाँसँग सहमत छु।
धेरै ठूला फार्महरूले जैविक खेतीको लागि पूर्ण रूपमा जैविक उत्पादनहरूको उत्पादनमा आँखा राखेर पायलट क्षेत्रहरू अलग राख्छन्।
जीवविज्ञानमा मुख्य कठिनाई यसको स्केलिंगमा ठ्याक्कै निहित हुन्छ। प्रत्येक क्षेत्रको लागि र प्रत्येक बालीको लागि व्यक्तिगत गणना बिना जैविक विधिले काम गर्दैन। यो लगातार माटोको अवस्था अनुगमन र बोटको विकास अनुगमन गर्न आवश्यक छ। धेरै किसानहरू प्लाटोको फाइटोसनेटरी राज्यको सही अवलोकन गर्न तयार हुँदैनन् वा कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्।
अनुमति दिनुहोस्, त्यसैले तिनीहरू जैविकरणसँग अन्धाधुन्ध काम गर्छन्, प्रायः असन्तुष्ट नतिजा प्राप्त गर्दछन्। र यसका साथसाथै, धेरै कृषि उद्यमहरूले १० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि कृषि बालीहरूको खेती गर्न एकीकृत योजनाहरूमा जैव विधि प्रयोग गर्दै आएका छन्, यी जैविक टेक्नोलोजीहरूमा सफलतापूर्वक पोख्त भएका छन्।
यदि जैविक उत्पादनहरूको प्रयोगको लागि सबै सर्तहरू र नियमहरू पूरा भए, तब जैविक प्रभावकारिता रासायनिक उत्पादनहरूको प्रभावकारिताको स्तरसँग मेल खान्छ, र लागतहरू कम कम हुन्छन्। यद्यपि, अवश्य पनि, धेरै किसिमको समस्याले कस्तो प्रकारको समस्या समाधान गर्न कोशिस गर्दै छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। बोटबिरुवा संरक्षणको जैविक विधिहरू प्रयोग गर्दा, यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि रोकथाम कार्यहरू गर्दा सबैभन्दा बढी दक्षता प्राप्त हुन्छ। यदि जैविक उत्पादनहरू औषधीय उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, तब प्रत्येक व्यक्तिगत अवस्थामा ड्रग्सको खुराकहरू (हानिकारक वस्तुहरूको प्रसारको डिग्री अनुसार) को छनौट गर्न आवश्यक हुन्छ।
उच्च परिणामहरू प्राप्त गर्न र सुरक्षा उपकरणहरूको प्रयोग लागत कम गर्न सम्भव छ भन्ने तथ्यको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो प्रयोगशालाको अनुसन्धान हो, बायोटेचग्रो कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको नेमाटोडसहित हानिकारक वस्तुहरूबाट स्ट्रबेरीको जैविक संरक्षण प्रणाली अध्ययन गर्न, साथै प्रभावकारिता पनि अध्ययन गर्न। बायोटेहेग्रो LLC द्वारा उत्पादित सूक्ष्म जीववैज्ञानिक तयारीको साथ खुला मैदान आलुहरूको संरक्षण।
उपयोगी प्राकृतिक सूक्ष्मजीवहरूमा आधारित जैविक उत्पादनहरूको सहयोगमा, हामीले EPV भित्र हानिकारक जीवहरूको विकास र फैलाउन कम गर्न, स्ट्रबेरी र आलुको वैरिएटल उपज बढाउन (पुनर्स्थापना) गर्न, सुरक्षा उपायहरू सञ्चालन लागत कम गर्न; बोटबिरुवा र माटोमा कीटनाशक भार घटाउनुहोस्, बालीको गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्।
उदाहरण को लागी, जैविक सुरक्षा संग आलु उत्पादन बढायो
१ 15% ले, र रासायनिक अभिकर्ताको तुलनामा जैविक उत्पादनको लागत times पटक घट्यो, र उही समयमा, कन्दाहरूमा स्टार्च र भिटामिन सी सामग्री बढ्यो र नाइट्रेट नाइट्रोजनको मात्रा घट्यो।
यदि फार्म जैविक उत्पादनहरूको प्रयोगको नतिजामा असन्तुष्ट छ भने, निर्माणकर्ता वा विक्रेताहरू प्राय: असफलताको लागि जिम्मेवार हुन्छन्। कहिलेकाँही एक औषधिको निराशा पूर्ण रूपमा जैविक प्रतिरक्षामा सारिन्छ। एकै समयमा, जैविक उत्पादनहरूसँग काम गर्ने अनुभव बिना, कृषिशास्त्रीहरू प्रायः विशेषज्ञहरूको सल्लाहलाई उपेक्षा गर्छन्।
जीवविज्ञानको साथ काम गर्दा सबैभन्दा सामान्य गल्तीहरू:
Storage भण्डारण सर्तहरूको पालना गर्न असफल।
प्रत्यक्ष सूक्ष्मजीवहरू समावेश गरेको तयारीको लागि, भण्डारण सर्तमा कडाईका साथ पालन आवश्यक छ। त्यहाँ सूक्ष्मजीवहरू छन् कि तापमान + °० डिग्री सेल्सियससम्म बढ्छ, विशेष गरी छोटो अवधिमा। अरूहरूका लागि यो विनाशकारी छ। थप रूपमा, केहि तयारीहरूमा, सूक्ष्मजीवहरू जीवित कोशिकाको रूपमा हुन सक्छन् र तापक्रम परिवर्तनहरूमा बढी संवेदनशील हुन्छन्, अन्यमा तिनीहरू बीजाणुको रूपमा बाँच्दछन्।
Drugs एक मिति समाप्त मिति संग औषधीहरूको प्रयोग।
जैविक उत्पादनहरू, अन्य बोट संरक्षण उत्पादहरू, मलहरू र वृद्धि उत्तेजकहरू जस्ता, तिनीहरूको आफ्नै शेल्फ लाइफ छ। यो जैविक उत्पादनको विशिष्ट संरचनामा निर्भर गर्दछ। जीससको केही ब्याक्टेरिया युक्त स्यूडोमोनस वा राइजोबियम (पछिल्लो लेगुइन बीउहरू उपचार गर्न प्रयोग गरिने बायोइनोक्लन्ट्सको अंश हो) तयारी
यो नोट गर्नुपर्दछ कि लेबलमा निर्माताले खोलिएको मूल प्याकेजि in्गमा शेल्फ लाइफलाई स indicates्केत गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरूले यस "नगण्य" विस्तारलाई वेवास्ता गर्छन्, विश्वास छ कि खुला प्याकेज एक वर्षको लागि गुणवत्ता गुमाए बिना खडा हुनेछ।
Anti जैविक उत्पादनहरूसँग एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्ट पछि तुरुन्तै उपचार गर्नुहोस्।
माइक्रोबायोलॉजिकल उत्पादनहरू एकै साथ अन्य जैविक उत्पादहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सबै होइन सबै हो। जैविक उत्पत्ति (स्ट्रेप्टोमाइट्सको डेरिभेटिभ्स) का एजेन्टहरू छन् जुन बिरूवा बढ्नका लागि एन्टिबायोटिक पदार्थहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस्तो औषधी तीनवटा हाम्रो देशमा दर्ता गरिएको छ: "कासुगामाइसिन", "फिटोलाभिन" र "फिटोप्लासमिन"। यी कोषहरू सफलतापूर्वक रोगहरू विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ, तपाईं
हानिकारक ब्याक्टेरिया भनिन्छ। सफलतालाई सुदृढ पार्न, त्यस्ता एन्टिबायोटिकहरूसँग कीटाणुरहित गरेपछि बोटबिरुवालाई रोक्न र लाभदायक माइक्रोफ्लोरा माटोमा परिचय गर्नु तार्किक हुनेछ। यद्यपि एन्टिबायोटिकमा एउटा कन्टेनरमा माइक्रोबायोलॉजिकल एजेन्टहरू थप्न र एउटा संयुक्त उपचार गर्न असम्भव छ। सबैभन्दा पहिले, यसलाई एन्टिबायोटिक पदार्थको साथ उपचार गर्न आवश्यक छ, र -7-१० दिन पछि, बोटबिरुवाहरू स्प्रे गर्नुहोस् वा जमिनलाई जैविक उत्पादनको साथ जीवित ब्याक्टेरियाहरूबाट पानी मिसाउनुहोस्। साथै, एकैसाथ वा तत्कालै तामाले युक्त तयारीको साथ बोटबिरुवाहरू स्प्रे गरेर उपचार गर्न असम्भव छ।
The दिनको बिचमा तातो घामको मौसममा उपचार।
St बासी काम गर्ने समाधानको प्रयोग।
Preparations समाधानको तयारी कन्टेनरमा मूल प्याकेजि fromबाट खन्याउनु अघि तयारीको धेरै तरल प्रकारहरू मिसिनु पर्छ।
Ice बरफको पानीमा समाधानको तयारी।
प्राय: ड्रगहरू धेरै चिसो पानीमा पातलो हुन्छन् (उदाहरणका लागि कुवा वा कुवाबाट)। यसले समाधान कम प्रभावकारी बनाउँछ। न्यानो (वा कोठाको तापक्रम) पानीमा काम गर्ने समाधान तयार गर्नु राम्रो हुन्छ।
Consumption उपभोग दर, फ्रिक्वेन्सी रेट र आवेदन विधिहरूको अवलोकन।
Time असामयिक उपचार वा अपर्याप्त उपचारहरूको संख्या।
Krasnodar क्षेत्र मा, वनस्पति संरक्षण को लागी जैविक उत्पादनहरु को एक मात्र दर्ता निर्माता LLC बायोथेग्रो हो।
समग्रमा, अवश्य पनि यस उद्योगमा धेरै समस्याहरू छन्: नियम बनाइएको छैन र औषधिको गुणस्तर निर्धारण गर्ने मापदण्ड औपचारिक गरिएको छैन; त्यहाँ कुनै क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरू छैनन् जसले क्वालिटी र टाइटरको लागि ब्याक्टेरियाको तयारी जाँच गर्दछ; औषधिहरूको गुणस्तरका लागि निर्माताहरूको कानुनी दायित्व परिभाषित गरिएको छैन; तिनीहरूको प्रयोगमा कुनै राज्य नियन्त्रण छैन।
रसियामा जैविक उत्पादनहरूको दर्ता एक जटिल र महँगो उपक्रम हो, जसले यस क्षेत्रको विकासलाई ठूलो बाधा पुर्‍याउँछ। नतिजाको रूपमा, रूसी उत्पादनको मात्रा र जैव कीटनाशक र जैविक उत्पादनहरूको प्रयोगको मात्रा यूरोपीयन र अमेरिकी स्तर भन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम छ।
वैज्ञानिक आविष्कारहरूको हिसाबले अझ धेरै कार्यहरू बाँकी छ: विशेष गरी जैविक उत्पादनहरूको छोटो जीवनको समस्या र वर्षाको प्रति तिनीहरूको कमजोर प्रतिरोधको साथ समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक छ।
टैग: २०२० №१जीवविज्ञानजीवविज्ञान